Wholesale YEMWE STEP HCV TEST (Yese Ropa / Serum / Plasma), HCV Rapid Bvunzo Yekushandisa Dhizaina vagadziri uye vanotengesa | HEO
Nzira yakajairika yekuona hutachiona neHCV ndeyekutarisa kuvapo kwemasoja ekudzivirira hutachiona nenzira yeEIA inoteverwa nekusimbiswa neWestern Blot. Iyo Imwe Nhanho HCV Bvunzo bvunzo yakapusa, inoonekwa yehunhu inoona masoja ekudzivirira vanhu muRopa revanhu / serum / plasma. Iyo bvunzo inoenderana ne immunochromatography uye inogona kupa mhedzisiro mukati memaminitsi gumi nemashanu.
Iyo Imwe Nhanho HCV Bvunzo ndeye Colloidal Goridhe yakawedzerwa, nekukurumidza Immunochromatoraphic Assay yeiyo yepamusoro yekuonekwa kweantibhakitiriya kune Hepatitis C Virus (HCV) muHuman Whole Ropa / Serum / Plasma. Uyu bvunzo kuyedza kuongorora uye zvese zvakanaka zvinofanirwa kusimbiswa uchishandisa imwe bvunzo senge Western Blot. Bvunzo inoitirwa Healthcare Professional kushandiswa chete. Kwose kuyedzwa uye mhedzisiro yekuyedza inoitirwa kushandiswa nevekurapa uye vezvemitemo chete, kunze kwekunge zvabvumidzwa nemutemo munyika yekushandisa. Muedzo haufanire kushandiswa pasina tarisiro yakakodzera.
Iyo assay inotanga nesampuli yakashandiswa kune iyo sampuli mushe uye nekuwedzeredzwa kweiyo yakapihwa sampuro inodurura ipapo ipapo. HCV antigen-Colloidal Goridhe conjugate yakadzika mune yekuenzanisira pad inobata pamwe neHCV antibody iripo mu serum kana plasma, ichiumba conjugate / HCV antibody tata. Sezvo musanganiswa uchibvumidzwa kutama uchitevedza tambo yekuyedza, iyo conjugate / HCV antibody yakaoma inotorwa neprotein-inosunga protein A inogadzikana pane membrane inogadzira bhendi rine ruvara munzvimbo yekuyedza. Muenzaniso wakashata hauna kuburitsa mutsara wekuyedza nekuda kwekushayikwa kweColloidal Gold conjugate / HCV antibody complex. Maantigen anoshandiswa pakuyedza mapuroteni anodzokorodza anoenderana nematunhu ane hutachiona hweHCV. Bhandi rekutonga rine mavara munzvimbo yekutonga inoonekwa panopera nzira yekuyedza zvisinei nemhedzisiro yebvunzo. Iri bhendi rekudzora mhedzisiro yeColloidal Goridhe conjugate inosunga kune anti-HCV antibody isina kubviswa pane iyo membrane. Iyo yekudzora mutsara inoratidza kuti iyo Colloidal Goridhe conjugate inoshanda. Kushaikwa kwechikwata chekutonga kunoratidza kuti bvunzo yacho haina basa.
REAGENTS UYE ZVINODZIDZISWA ZVAKAITWA
Chiyero chekuyedza chimwe nechimwe chidimbu chakabikwa ne desiccant
• Kudonhedza kwepurasitiki.
• Mharidzo Diluent
• pasuru Isa
ZVINODZIDZWA ZVINODIWA ASI HAZVIPIWE
Dzakanaka uye dzakaipa kutonga (kunowanikwa sechinhu chakasiyana)
Kuchengeta & kugadzikana
Miti yekuyedza inofanirwa kuchengetwa pa2-30 ℃ muhomwe yakavharika uye pasi pemamiriro akaoma.
1) Mhedzisiro yese inofanirwa kusimbiswa neimwe nzira.
2) Bata zvienzaniso zvese sekunge zvinogona kutapukira. Pfeka magurovhosi uye zvipfeko zvekudzivirira kana uchibata zvienzaniso.
3) Midziyo inoshandiswa kuyedza inofanirwa kuve yakagadzirirwa pamberi pekurasa.
4) Usashandise kit zvigadzirwa kupfuura avo mazuva ekupera.
5) Usachinjana reagents kubva akasiyana majenya.
SAMPLE KUSANGANISIRA NOKUCHENGETEDZA
1) Unganidza Ropa Rizere / Serum / Plasma zvienzaniso zvinotevera zvekiriniki marabhoritari maitiro.
2) Kuchengeta: Ropa rose harigone kuomeswa nechando. Chimiro chinofanirwa kunge chiri firiji kana chikasashandiswa zuva rimwe chetero rekuunganidzwa. Zviratidzo zvinofanirwa kuve nechando kana zvisina kushandiswa mukati memazuva matatu ekuunganidza. Dzivisa kutonhora uye kunyungudusa iwo maenzaniso kupfuura kanokwana katatu usati washandisa. 0.1% yeSodium Azide inogona kuwedzerwa kuenzanisi sechinhu chekuchengetedza pasina kukanganisa mhedzisiro yeiyo muyedzo.
1) Uchishandisa yakadonhedzwa epurasitiki yekudonhedza semuenzaniso, govera 1 donhwe (10μl) reRopa Rese / Serum / Plasma kune yakatenderera sampuro tsime rekadhi rekuyedza
2) Wedzera madonhwe maviri eSampuli Diluent kune iyo sampuli mushe, pakarepo mushure mekunge iyo specimen yawedzerwa, kubva kudonhedza tip diluent vial (kana zvese zvirimo kubva kune imwechete bvunzo ampule).
3) Dudzira mhinduro bvunzo pamaminitsi gumi nemashanu.
1) Kunyorera huwandu hwakakwana hwesampu diluent kwakakosha kune chaiyo bvunzo mhedzisiro. Kana kutama (iyo yekunyorova ye membrane) isina kucherechedzwa pawindo rekuyedza mushure meminiti imwe, wedzera rimwezve donhwe rekudzora pamuenzaniso zvakanaka.
2) Mhedzisiro yacho inogona kuoneka nekukurumidza seminiti imwe yemuenzaniso ine huwandu hwakakwira hweHCV antibodies.
3) Usaturikire mhinduro mushure memaminitsi makumi maviri
KUVERENGA ZVINOGONESESA ZVEYedzo
1) Zvakanaka: Ose ari epepuru tsvuku bvunzo bhendi uye yepepuru tsvuku yekudzora bhendi inoonekwa pane membrane. Iyo yakadzika iyo antibody yevasungwa, ndiyo isina kusimba bvunzo bhendi.
2) Negative: Chete purplish tsvuku yekudzora bhendi ndiyo inoonekwa pane membrane. Kushaikwa kwebhendi rekuyedza kunoratidza mhedzisiro yakaipa.
3) Mhedzisiro isiriyo: Panofanirwa kugara paine purplish tsvuku yekudzora bhendi mudunhu rekutonga, zvisinei nemhedzisiro yemuedzo. Kana control band isingaonekwe, iyo bvunzo inoonekwa seisina basa. Dzokorora bvunzo uchishandisa chishandiso chitsva chekuyedza.
Cherekedza: Zvakajairika kuve neyakareruka kudzora bhendi ine yakasimba kwazvo sampuli, chero bedzi ichinyatso kuoneka.
1) Chete yakajeka, nyowani, yemahara inoyerera Yese Ropa / Serum / Plasma inogona kushandiswa muyedzo iyi.
2) Masampure matsva akanakisa asi masampuli echando anogona kushandiswa. Kana sampuro yave yakaoma nechando, inofanirwa kubvumidzwa kuti inyungudike munzvimbo yakatwasuka uye kutariswe kuyerera. Ropa rose harigone kuomeswa nechando.
3) Usashatise muyenzaniso. Isa pipette pazasi pechiso chemuenzaniso kuti utore iyo Sampuli.
Pashure: HCV Inokurumidza Kuedza Kaseti / Strip / kit (WB / S / P)
Zvadaro: COVID-19 Influenza A + B Antigen Combo Rapid Kwayedza Kaseti